Etu aga-esi amata ma egwuregwu na agba na PC m 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kedu ka m ga - esi mara ma egwuregwu n’agba na PC m? Nwere ike ịchọta ngwa ngwa site na enyemaka nke ngwaọrụ pụrụ iche dịka weebụsaịtị Enwere m ike ịgba ya?. Ọ bụrụ n’ịchọghị ka nyocha kọmputa gị, inwere ike iji usoro ọdịnala iji atụnyere nkọwapụta aka.
Lee n'okpuru otu esi ahụ ma PC gị adịghị ike ma ọ bụ na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma iji gbaa egwuregwu ahụ.
Site n'enyemaka nke weebụsaịtị pụrụ iche
E nwere ụfọdụ weebụsaịtị na-ahụ maka ịtụle nkọwa nke kọmpụta gị yana opekata mpe ihe egwuregwu isi egwuregwu choro. Ma ọ bụ Enwere m ike ịgba ya? bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu, inwe ike inyocha nhazi nke akụrụngwa gị na akpaghị aka.
1. Mepee ihe nchọgharị ị họọrọ wee gaa Enwere m ike ịme ya?
2. Na ibe mbu, ị ga-ahụ igbe nchọta nke ịchọrọ iji pịnye aha egwuregwu ahụ, Ndị Sims 4. Ọ bụrụ na egwuregwu dị na katalọgụ peeji, ọ ga-apụta na listi. Pịa na aha ahụ pụtara iji zere njehie ọchụchọ;
3. Wee pịa bọtịnụ ahụ Nwere ike ịgba ọsọ ya ime nyocha ahụ;
4. Na peeji na-esote, a ga-egosipụta opekempe kachasị mma na nke kacha mma iji gbaa egwuregwu ahụ. Ka e wee nyochaa PC gị, ọ dị mkpa ibudata faịlụ nke na-enye ohere webụsaịtị iji nyochaa njirimara teknụzụ nke igwe gị. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ Nwere ike ịgba ọsọ ya iji budata ngwa ahụ na weebụsaịtị;
5. Mepee faịlụ a na-agba ọsọ ma mepee ibe weebụ mepee. Ihe omume ga-akpaghị aka na-amalite iji nyochaa igwe gị;
Dabere na ihe nchọgharị ahụ, a ga-egosipụta usoro ihe omume ahụ na ala nke ihuenyo ahụ mgbe nbudata zuru ezu. Ọ ga-abụ dị na download ndepụta nke nchọgharị na n'ezie na ebe nchekwa.
6. Diagnostic oge nwere ike ịdị iche site na obere sekọnd na nkeji ma nsonaazụ ya ga-egosipụta na ibe weebụ ị meghere. Ọ na - agwa gị ma igwe gị nwere opekata mpe ihe dị mkpa yana yana ndị akwadoro ka egwuregwu ahụ wee rụọ ọrụ n’enweghị nsogbu.
Saịtị ndị ọzọ iji chọpụta ma ọ bụrụ na egwuregwu ahụ na-agba ọsọ na PC
PCGameBenchmark na-enye gị ohere itinye aka na ntọala PC ma ọ bụ budata ngwanrọ nke na-enyocha ihe igwe na akpaghị aka. Mgbe ahụ, chọọ aha egwuregwu ahụ.
Mkparịta ụka egwuregwu
N'agbanyeghị na e nwere ọkachamara na aha EA, arụmụka egwuregwu nwere nhọrọ site n'aka ndị mmepe ndị ọzọ. Dị ka ngwá ọrụ gara aga, ọ na-enye gị ohere iji aka gị tinye data ma ọ bụ budata ngwa na-anakọta ozi gbasara PC ozugbo. Yabụ, naanị chọọ egwuregwu achọrọ.
Wayzọ ọzọ ị ga - esi chọpụta ma egwuregwu ọ ga - arụ na PC gị bụ iji aka kọwaa nkọwapụta teknụzụ nke PC yana obere ihe egwuregwu achọrọ. Ngwọta ahụ nwere ike iwe obere oge karịa site na weebụsaịtị, mana ọ dịkwa mfe ịme.
Otu esi achọta nkọwa PC
Nwere ike ịchọpụta nkọwapụta teknụzụ nke kọmputa gị n'ọtụtụ ụzọ. Nke kachasị mfe n'ime ha bụ site na ịde okwu ahụ Msinfo 32.exe na igbe ọchụchọ Windows. Dabere na ụdị sistemụ ahụ, akụrụngwa ọchụchọ dị na ogwe ngwaọrụ ma ọ bụ na menu Mmalite (site na ịpị akara ngosi Windows).
Na nsonaazụ ọchụchọ, pịa Msinfo 32.exe imeghe. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, ịnwere ike ịchọrọ Gbaa dị ka onye nchịkwa. Iji lee nhọrọ ahụ, pịa nri na nsonaazụ ya.
Na windo Ozi sistemụ, na aka ekpe n'akụkụ mmanya, pịa Nchịkọta usoro. Nwere ike ịlele ozi gbasara sistemụ nrụọrụ (1), processor (2) mi ncheta (3).
Elele nchekwa, pịa Nchekwa wee banye Units.
Ka o sina dị, iji chọpụta ụdị kaadị vidiyo gị, pịa Akụkụ wee banye Nkpughe. Ọ bụrụ na kọmputa gị nwere kaadị raara onwe ya nye na kaadị arụnyere, a ga-egosipụta data na ụdị abụọ ahụ.
Onye ndu anyi Lelee ntọala PC na-akọwa otu esi lelee nkọwapụta n'ụzọ zuru ezu na ụdị Windows dị iche iche. Jụọ ma ịchọrọ ịmatakwu ihe gbasara isiokwu a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ngwangwa usoro a, ịnwere ike iji mmemme ahụ Uronke CCleaner dere. The free version nwere ike ịchọpụta ngwaike na-enye ndị dị mkpa ọmụma iji hụ ma a egwuregwu bụ dakọtara na akụrụngwa gị.
Naanị budata, wụnye ma pịa bọtịnụ ahụ Gbaa Speecy. N'ime sekọnd, data banyere ngwaọrụ gosipụtara, dịka egosiri n'okpuru. Na mgbakwunye, a na-akọkwa okpomọkụ nke CPU na kaadị vidiyo.
Tụnyere ihe kacha nta egwuregwu chọrọ
Ozugbo inwere nkọwapụta teknụzụ nke kọmpụta gị dị n'aka, tụlee ihe ndị kachasị mkpa dị mkpa maka egwuregwu ahụ na igwe. Ozi a na - adịkarị na weebụsaịtị ndị mmepe na n'elu ikpo okwu na-akwado ha.
Na Steam, dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịchọta ozi ahụ n'okpuru ngalaba Banyere egwuregwu a. na Usoro chọrọ, bụ ihe kacha nta na nke akwadoro iji jiri egwuregwu na PC.
N'ihe banyere FIFA 21, a ga-egosipụta nsonaazụ na-esonụ:
Ihe ọzọ bụ iji saịtị ndị ga-emezu ihe kacha nta nke egwuregwu ndị isi n'otu ebe. Naanị chọọ aha iji chọta ihe ị chọrọ.
Enwere m ike ịme ya, PCGameBenchmark na arụmụka egwuregwu na-enye data a. E wezụga ha, e nwekwara peeji Game Chọrọ peeji nke.
Ihe pere mpe x Akwadoro ihe achọrọ
Ihe kacha nta dị mkpa na-egosi ngwaike nke nwere ike ịgba egwuregwu. Otú ọ dị, ọ ga-eme nke ọma, dị ka ndị na-eme ka ọ dị mma na ndị ka mma, ma ọ bụrụ na PC nwere nkọwa ndị akwadoro.
Sistemụ arụmọrụ yana oghere diski achọrọ adịghị iche n'etiti opekempe na nke akwadoro. RAM, processor na eserese eserese bụ ihe ndị nwere ike ịdị iche na ibe ha.
Ndị kacha mma Android light emulators ka ị kpọọ na PC adịghị ike
Nhọrọ ederede maka PC adịghị ike
Otu esi ejikọ ekwentị gị na TV na-enweghị smart na ụzọ 5 dị iche iche